Fossil dia hanolotra ny smartwatch andiany fahefatra amin'ny IFA 2018 | Androidsis
Eder Ferreño | | IFA, About us, SmartWatch
Nanjary iray amin'ireo mpanamboatra fanta-daza amin'ny sehatry ny smartwatch ny fosil. Ny orinasan-damaody dia afaka namorona famantaranandro misy famolavolana tsara, ahazoana aina hitafy ary asa tsara. Efa miomana izy ireo hanolotra ny taranany fahefatra, izay ho avy miaraka amin'ny fanatsarana maro. Afaka hihaona amin'ireo famantaranandro ireo isika amin'ny faran'ny volana amin'ny IFA 2018.
Ny hetsika any Berlin dia ny lohataona nofidian'ny orinasa hanolotra ireo famantaranandro vaovao ireo. Generation vaovao an'ny Fossil izay tonga miaraka amina asa vaovao. Anisan'izy ireo no ahitantsika fiasa toy ny GPS na Google Pay.
Fossil Q Venture HR sy ny Fossil Q Explorist HR no anaran'ireto maodely vaovao avy amin'ny mpanamboatra. Haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny hetsika any Berlin izy io, alohan'ny hanombohan'ny tsena ofisialy. Hisy kinova maromaro ho an'ny tsirairay, arakaraka ny tadiny tadiavina.
Araka ny efa nolazainay taminao, dia hisy fiovana avy aminao. Fandraisana vaovao no miandry antsika, izay ahafahana mifehy tsara ny fampihetseham-batana sy ny tahan'ny fo. Ho fanampin'izay, hanara-maso ho azy ny fahombiazan'ny toe-batana misy ny mpampiasa. Mba hanaovana izany, ny orinasa dia manolotra sensor vaovao amin'ny famantaranandro.
Tsy ny sensor ihany no ampidirina handrefesana ny hetsika ara-batana tsara kokoa. Ho azo atao koa izany mandoa vola amin'ny famataranandro, misaotra an'i Google Pay sy NFC. Ireo maodely Fossil vaovao dia hanana GPS ihany koa, izay tsy hiankina amin'ny telefaona. Ho an'ny ambiny, ny fiasan'ny besinimaro dia miandry antsika amin'ny famantaranandro (gyroscope, accelerometer, submersible ...).
Ny vidin'ireto maodely ireto dia eo anelanelan'ny 279 sy 299 euro. Miankina amin'ny tady tadiavina dia miovaova ny vidiny, na fehin-koditra io na vy. Afaka herinandro vitsivitsy dia hianarantsika bebe kokoa momba ireo maodely Fossil vaovao ireo, izay mampanantena ny hamela ny mpanjifa hanana tsiro tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fossil dia hanolotra ny smartwatches vaovao ao amin'ny IFA 2018
HTC dia mirakitra ny faktiorany ratsy indrindra ao anatin'ny 15 taona